ज्योति मगर माथि होटल साहुको गिद्दे नजर !, मध्येराती जबर्जस्ती कोठामा छिरेर राखे यस्तो प्रस्ताव (भिडियो सहित) « Dhankuta Khabar
प्रकाशित मिति : Nov 26, 2018
समय : 2:57 PM
इटहरी । चर्चित दोहोरि गायिका ज्योति मगर बेला बेलामा विभिन्न हर्कतका कारण चर्चामा आउने गरेकी छिन । हट अवतारमा स्टेजमा प्रस्तुति राख्ने ज्योति दर्शकलाई आफु केन्द्रित गराउदै स्टेज तथाउँ निकै माहिर मानिन्छिन ।
हुन् त् त्यो कलाकारहरुको आ आफ्नो दर्शक बाध्ने खुबी पनि हो । यतिबेला गायिका ज्योति मगरको फेसबुकमा भएको लाइभ भिडियो निकै चर्चामा छ । उक्त्त लाइभ भिडियोमा ज्योतिले आफूमाथि होटल साहुले दु:ख दिएको कुरा खुलाएकि छिन ।
रातको समयमा होटलमा बसिरहेकी ज्योतिलाई होटल साहुले ढोका ढक्ढक्याउदै जबर्जस्ति कोठामा छिरेर संगै बियर खाउ, पहिलो भेटमा संगै एक गिलास मात्र पिउ भन्दै करकाप गरिरहेको उक्त्त भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
सार्बजनिक भिडियोबाट नेपालका सेलिब्रेटीहरु विभिन्न बहानामा असुरक्षित छन् भन्ने स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ । अन्त्यमा आफु लाइभमा आउन मन नहुदानाहुदै पनि होटल साहु जस्तो मान्छेले राति ढोका ढक्ढक्याए पछि लाइभमा आएको स्पस्ट पारेकी छिन । हेर्नुस भिडियो
चर्चित टेलिसिरियल ‘भद्रगोल ’ को आजको नयाँ २२२ औं श्रृंखला हेर्नुहोस् (भिडियो)
संसारको अग्लो भवन बुर्ज खालिफामा नेपाली झण्डा झलमलाउदै (भिडियो सहित)
आजको मुन्द्रेको कमेडी क्लबको ४६ औं एपिसोडमा कबड्डी-कबड्डी-कबड्डीको यो टीम ! हेर्नुहोस् भिडियो
सांसद ठेक्केदारले बनाएको पुल- खोला एकातिर पुल अर्कैतिर (भिडियो सहित)
प्रखर, निडर, निर्भीक अनि सर्वप्रिय वक्ता रमेश प्रसाईंसंग रबि लामिछानेको एक साथ मिडियामा ! सम्पूर्ण नेपालीलाई गरे यस्तो अनुरोध… – हेर्नुस भिडियो
रविको आक्रोश,- भन्सारले सुकिला-मुकिलाहरुको सुटकेश चेक गर्छ ? : एयरपोर्ट भित्रैबाट लाईभ, ६ हजार मागेको गुनासो (भिडियो सहित)